Banyere Anyị - Wuxi Lead nkenke Machinery Co., Ltd.
Wuxi Lead nkenke Machinery Co., Ltd. Bụ A CNC Machine Shop Ije Ozi nkenke CNC machined Parts, Metal zọ na mpempe akwụkwọ Metal Ingha Na A iche iche nke Industries.
Anyị nwere ihe karịrị afọ 15 nke ahụmịhe na-arụpụta akụkụ dị mma yana ihe ngosipụta maka ndị na-emepụta ngwa ọrụ (OEM) gafee ụwa.
Anyị bụ ụlọ ọrụ ndị nwe ụlọ na ntọala na 2000.
Na mbido, enwere naanị igwe 2 CNC na ụlọ ọrụ anyị na ndị ahịa anyị abụghị nnukwu ụlọ ọrụ. Otú ọ dị, site na ahụmịhe anyị bara ụba na mma dị mma, ụlọ ọrụ anyị na-eto ngwa ngwa na ndị ahịa anyị ọnụ.
Ngwaọrụ CNC anyị mụbara ruo 10. Ndị ọrụ anyị rịrị elu site na 2 ruo 12.
Anyị kwagara osisi ọhụrụ anyị. Anyị na-amalite ịbụ America Military Company OEM akụkụ soplaya.
Anyị nwere ihe karịrị 20 CNC igwe ugbua. Anyị mere titanium na fiber iko prototypes maka ndị agha ụlọ ọrụ.
N'ihi ịdị mma dị elu na nnyefe oge, ndị ahịa anyị Irish kwadoro ka anyị bụrụ ndị na-eweta Wheel Hub maka Racing Cycle maka 2012 London Olympic Games.
Anyị bụ ndị America Military Company kpọmkwem titanium na Glassfiber CNC machined akụkụ soplaya. Ka ọ dị ugbu a, anyị bidoro ịkwado ụlọ ọrụ Auto Tuning a kacha mara amara na America.
Anyị wuru ma kwaga n’ebe ọrụ ọhụrụ anyị. N'afọ a, ndị ọrụ anyị ghọrọ ihe karịrị 50, ma guzobe ọfịs anyị na CA, USA.
Na-atụ anya CNC machining usoro, anyị azụmahịa gbasaa Metal stamping na mpempe akwụkwọ metal usoro.
Site ugbu a, anyị ka na-ịgbasa ugbu a, ihe mgbaru ọsọ anyị bụ KA ANY MAC CNC igwe ụlọ ahịa na-abụ nke gị.
Anyị na-eme akụkụ ọdịnala nwere echiche ise dị mkpa.
Kemgbe ọtụtụ afọ, anyị mepụtara aha maka ịbụ ụlọ ọrụ na-ejikwa ọrụ ndị siri ike onye na-achọghị ka ndị ọzọ rụọ. Mkpebi anyị na-aga n'ihu iji mepụta akụkụ na ihe ndị nwere ntụpọ efu emeela ka ndị otu anyị bụrụ ndị na-edozi nsogbu ọkachamara. Nke ahụ bụ isi ihe kpatara anyị ga-eji nye onyinye na asọmpi Olympic.
Anyị na-asọmpi ọnụ ahịa ma anyị anaghị emebi iwu. Anyị na-enye asambodo na ọkwa ọ bụla maka nnabata na iji nweta nkọwapụta. Parts na e mere nke ọma na machined si ezi ihe outlastly cheaply mere ngwaahịa na ndị ọzọ na-eri-irè na n'ikpeazụ. Site na ọzụzụ nkuzi na nkuzi oge niile, ndị ọrụ anyị nwere echiche dị mma.
Get nwetara usoro gị na oge, zuru ezu na na nkọwapụta.
CNC-egwe ọka, CNC ntụgharị, Metal zọ, Mpempe akwụkwọ metal metalgha usoro izute gị iwu.
Ndị ahịa ahịa ndị ahịa 4 nwere ahụmahụ na-ejere gị ozi na 24 awa 7 ụbọchị. Anyị na-agbasi mbọ ike ịdị ka ndị na-ekwukọrịta okwu dị ka 'ụlọ ahịa igwe gị'. Anyị dị mgbe ịchọrọ anyị. Kpọtụrụ anyị site na Nkata Onlinentanetị, Oku ekwentị ma ọ bụ Email.